Filtrer les éléments par date : dimanche, 09 janvier 2022
dimanche, 09 janvier 2022 14:08
Tsihombe : Nanolotra fitaovana imprimante ho an'ny Zandary
Ho fanohanana Ireo Zandary manao ny asany ao amin'ny "Brigade de la Gendarmerie" ao Tsihombe dia nanolotra fitaovana hanamorana ny asa, toy ny " Imprimante Noir et blanc, Couleur" ny Kestiora voalohany ao amin'ny Antenimieram-pirenena, Solombavam-bahoaka voafidy eto Ambovombe Androy, Atoa HENRI Jean Michel.
Sanatatra ihany izao fa ezahana hisitraka izao fanomezana izao avokoa ireo "Brigade" izay hita tokoa fa tena manao ny asany ka mila tohanana hoy ny Depiote Jean Michel.
dimanche, 09 janvier 2022 12:14
Abakabaka : Nandefa zanabolana 52 Starlink i SpaceX
Miazakazaka ny Orinasa amerikanina SpaceX hametraka ireo zanabolana Starlink 12 000 momba ny fifandraisan-davitra, internet, alohan'ny taona 2025, eny amin'ny 100km miala ny tany, fanombohan'ny toerana hitsingevanana, na ny atmosfera faritra ambany.
Ny sabotsy 06 janoary 2022 ny sambondanitra Falcon 9 no nitondra ireo sandrahaka zanabolana 52, izay nalefa haka ny toerany avy.
Efa 1900 ny zanabolana voapetraka hatreto, ary manomboka maka ny toerany ny Orinasa SpaceX amin'ny fandraharahana momba ny internet.
dimanche, 09 janvier 2022 12:06
Amboasary Gara (MLA) : Vehivavy bevohoka nisy naka an-keriny
Vehivavy mitondra vohoka miaraka amin-jaza iray no nisy naka an-keriny tany amin’ny tanàna kely antsoina hoe Somangana ao atsinanan’Amboasary Gara (MLA), 60 km avaratr’i Moramanga amin’iny lalam-pirenena faha-44 mankany Alaotra iny.
Tamin'ny 30 desambra 2021 no nitrangan’ity asa ratsy ity, saingy tsy mbola navotsotry ny jiolahy ireo olona nobaboina hatramin’izao.
Nanamafy ny fisian’io asan-jiolahy io ny tompon'andraikitry ny mpitandro filaminana izay eo am-pikarohana ireo olona ireo raha vantany vao naharay ny fampandrenesana.
Mitentina 130 tapitrisa Ariary ny vola takalon’aina notakian’ireo mpaka an-keriny an-telefona tany am-boalohany, araka ny resaka miely.
Nidina 100 tapitrisa izany taorian’ny adivarotra, ary mbola nidina ho 95 tapitrisa indray izany ankehitriny.
Nomen’ny mpaka an-keriny fepotoana toy ireny amin’ny horonan-tsarimihetsika ireny ny fianakaviana, izay mipenimpenina manangona ny vola.
dimanche, 09 janvier 2022 11:40
Andekaleka : Ho avy hitsidika ny filoha
Hanatanteraka fitsidihana ny toerana misy ny tobim-pamokarana herinaratra any Andekaleka Brickaville ny filoha Andry Rajoelina rahampitso alatsinainy 10 janoary raha tsy misy ny fiovana.
Efa nialoha lalana omaly sabotsy sy androany alahady maraina tamin’ny alalan’ny kalesin-dalamby niainga tao Andasibe Moramanga ireo andian’ny mpitandro filaminana, mpiaro ny manampahefana ambony.
Misy tsy zaka mihitsy aza noho ny hamaroany, araka ny filazan’ireo nahita maso mivantana.
Tsiahivina fa nirehitra ny “transformateur”, izay voalaza fa efa antitra, tao Andekaleka ny Alahady 2 janoary teo.
Niteraka olana teknika goavana hafa noho ny fiakaran’ny rano tao anatin’ny tobim-pamokarana indray izany avy eo.
Manginy fotsiny ny fahatapahan’ny famatsiana herinaratra ho an’Antananarivo sy ny tambazotra mifandrirotra aminy.
Voalaza fa efa tonga any an-toerana tao anatin’ny fotoana fohy ny milina vaovao hasolo ny tranainy, ary dia io hidina any an-toerana io mihitsy ny filoha izy tenany.